3 Umbala weSmart Tecar yeRadio Frequency RF yoLusu oluQinisekisayo ST02
1.Ukususwa kombimbi 2.Ukuqiniswa kwesikhumba 3.Ukulawulwa kwentlungu 4.Ukuyekelela izihlunu
Unyango lwamaza oMothuko Ultrasonlc Muscle Paln Ukususwa
Unyango lomothuko luvele njengonyango olunokubakho kwizigulana ezinengxaki yeethenda ezingapheliyo. Inkqubo isebenzisa umoya oxinzelelweyo okanye ukubetha kombane ukuhambisa amaza othusayo emzimbeni ukunceda ukunyanga ukuphazamiseka okungapheliyo, kubandakanya: iPlantar fasciitis, iCalcific tendo ...
I-660nm yokukhulisa iinwele kumatshini wonyango wokulahleka kweenwele kunyango kwakhona
Unyango lweLaser yeenwele lunyango olungelulo olomichiza, olungenasidlangalaleni olusetyenziswa ngokuxhaphakileyo kunyango lokulahleka kweenwele. (Unyango lwe-laser yonyango olusezantsi) ihanjiswa sisixhobo esiqulathe iiphaneli zelaser ezikhanya entlonzeni. Yinkqubo ephezulu yonyango yokulahleka kweenwele, esekwe kwi-660nm ephantsi -...
Ekuqaleni konyaka omtsha we-2021, iZohonice Khupha i-Promotion enkulu yeemodeli zeZinto zoBuhle. Ibandakanya umatshini wokulwa ne-ging yobuso be-4DHIFU Ultra / Fractional CO2 Laser, ulusu lobuso ekuboneni umatshini wokucoca nzulu -iOxge Hydro, iTattoo Removal Wrinkle Removal Professional Q-switch ND YAG l ...